‘धुर्मुस’ को फिल्म ‘सेन्टी भाईरस’ नै नहेरी किन बाहिरिए दीपकराज ? आखिर किन – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/‘धुर्मुस’ को फिल्म ‘सेन्टी भाईरस’ नै नहेरी किन बाहिरिए दीपकराज ? आखिर किन
‘धुर्मुस’ को फिल्म ‘सेन्टी भाईरस’ नै नहेरी किन बाहिरिए दीपकराज ? आखिर किन
8,8712minutes read
फिल्मी राजनीति गर्न माहिर खेलाडी मानिन्छन् दीपकराज गिरी । उनले गर्ने राजनीतिको गन्ध आफ्नो समुहले निर्माण गरेको फिल्म प्रदर्शनको संघारमा रहँदा विशेष देखिने गर्दछ । उनको समुहले निर्माण गर्ने फिल्म दशैंमा प्रदर्शन हुने गरेका छन् । दशैंमा प्रदर्शनमा आउने अरु फिल्मका मेकरलाई ललाइफकाइ गरि पछाडि सारेर आफ्नो फिल्म ल्याउन उनी ज्यादै सिपालु छन् ।
विदेशी फिल्मसँग भिड्न नेपाली फिल्म योग्य भएको भन्दै तालीको वर्षात हुने भाषण गर्ने तर विदेशी फिल्मसँग भिड्नु परे आफू चाहिँ कुना पस्ने निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरी अहिले अर्को दशैंको फूलपातीमा प्रदर्शनका आउन लागेको फिल्म ‘छक्का पञ्जा ४’ को स्क्रिप्ट लेखनमा व्यस्त छन् । त्यसैले आजभोली उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा निकै कम देखिने गरेका छन् ।
आइतवार उनी आफ्नो समुहमा रहेर ‘वडा नम्बर ६’ र ‘६ एकान ६’ मा काम गरेका हास्यकलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले अभिनय गरेको फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ हेर्न कुमारी हलमा पुगेका थिए । उनको समुहका मुटु मानिने केदार घिमिरे र जितु नेपाल पनि फिल्म हेर्न पुगेका थिए । फिल्म हेर्नु अगाडि दीपकराजले ‘धुर्मुस’ लाई अंकमाल गरेर फिल्म असफलताको शुभकामना दिए ।
‘धुर्मुस’ को आग्रह स्वीकार गर्दै ‘सेन्टी भाइरस’ हेर्न हल पुगेका उनी साँझको साढे ६ बजेपछि कुमारी हलको आँगनमा फिल्मकर्मीहरुसँग कुराकानीमा व्यस्त थिए । तर, जब फिल्मको शो सुरु भयो र निमन्त्रणा गरिएका अतिथीहरु हल झिरे तब उनी लुसुक्क हलबाट बाहिरिए । उनी फिल्म नै नहेरी हलबाट निस्किएको प्रत्यक्ष देख्ने एक व्यक्तिले फिल्मीखबरलाई बताए ।
फिल्म सकिएपछि हलको बाहिर फिल्मकर्मीको प्रतिक्रिया बुझ्न उपस्थित भएका दुई दर्जनभन्दा बढी मिडियाका क्यामेराले दीपकराज गिरीलाई खोजेका थिए । तर, हलबाट केदार र जितु मात्र निस्किए । ‘सेन्टी भाइरस’ ले दुई दिन हलमा दर्शकको ठूलो भीड तान्दा आफ्नै फिल्म चलेझैँ फेसबुकमा खुसी व्यक्त गरेका उनी हल पुगेर पनि फिल्म नै नहेरी चाहिँ किन फर्किए ?
फागुन १० गते शनिवार कलाकार दीपकराजले आफ्नो भेरिफाइड फेसबुकमा ‘सेन्टी भाइरस’ ले हलमा दर्शकको भीड तान्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त हुँदै लेखेका थिए, ‘धेरैपछि दर्शक हलमा आए । अत्यन्त खुसीको कुरा हो । दर्शक हराएका रहेनछन् । अब आएका दर्शक टिकाउने कि भड्काउने त्यो चाहिँ हाम्रै हातमा छ ।’ उनको यो स्टाटसमा खुसी र ब्यंग्य दुवै मिसिएको छ ।
तर, उनले लेखेको यो स्टाटसलाई सामान्य अर्थमा भने लिन सकिन्न । उनले फिल्म हेर्न हलमा दर्शक आएकोमा खुसी व्यक्तसँगै ‘दर्शक टिकाउने कि भड्काउने’ वाक्यले फिल्मप्रति नै झटारो हानेको छ । किनकि, ‘सेन्टी भाइरस’ ले दर्शक र समीक्षकबाट राम्रो प्रतिक्रिया बटुल्न सकेको छैन । कतिपयले ‘धुर्मुस सुन्तली’ को यो फिल्मले दर्शक भड्काएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
‘सेन्टी भाइरस’ लाई प्राप्त नकारात्मक प्रतिक्रियाका कारण दीपकराजले हलमा पुगेर पनि फिल्म नहेरेको हुनसक्ने फिल्म हेरेर फर्किएका फिल्मकर्मीबीच कानेखुसी भएको थियो । नराम्रो फिल्मलाई पनि मिडियामा ‘उत्कृष्ट’ भन्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनी फिल्म नै नहेरी बाहिरिएको हुनसक्ने अनुमान पनि धेरैले काटे । साथै, ‘धुर्मुस’ सँग उनको तिक्तता बढ्नेको आँकलन पनि गरियो ।
‘वडा नम्बर ६’ र ‘६ एकान ६’ पछि ‘धुर्मुस’ लाई आफ्नो समुहले निर्माण गर्ने फिल्ममा लिन दीपकराजले कयैन् प्रयास गरेका थिए । तर, आफूलाई एकैखाले भूमिकामा सीमित राखेकोमा सितारामले असन्तुष्टि जनाउँदै दीपक-दीपाको समुहबाट अलग भएको बजारमा चर्चा छ । यसपछि दीपकराज र सितारामबीच देखाउने र वास्तविक सम्बन्ध फरक-फरक रहेको बताइन्छ ।
‘सेन्टी भाइरस’ हेर्नका लागि हल पुग्नु तर फिल्म सुरु भएपछि कसैलाई जानकारी नै नगराइ लुसुक्क बाहिरिनुले दीपकराजको ‘धुर्मुस’ सँग सम्बन्ध विग्रिएको भन्ने चर्चालाई ठूलो मलजल मिलेको छ । नभए, अरु निर्माताको फिल्म हेर्न पुग्दा तारिफ गर्ने उनी एक समयमा आफ्नै समुहमा रहेर काम गरेका कलाकारको फिल्म नै नहेरी हलबाट बाहिरिनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्न
हट नायिका सुष्मा कार्कीले नाइटो छेडेको भिडियो र तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
४८ बर्ष लाग्दा पनि उतिकै जवान र सुन्दरी छिन् अभिनेत्री निरुता सिंह